(50 okushiwo abanye)
Lucknow, Uttar Pradesh, i-India
Ikamelo e-ikhaya eliyindawo yokuhlala ibungazwe ngu-Fariha
Leli yi-suite yamakamelo angu-2 (igumbi lokugezela elinamathiselwe kwi-cum dressing) esitezi sokuqala elinekhishi kanye nethala elikhulu elibheke ekamelweni. Jabulela Ekuseni / Kusihlwa ngaphandle kwelanga uhlezi ebusika, noma itiye elipholile kanye nesidlo sakusihlwa ngesikhathi sasehlobo !! Le ndawo ilungele umuntu oyedwa, abadala abangu-2 kanye nomndeni 4/5. Uma umbhangqwana kunemibhangqwana eshadile kuphela.
Ixhumeke kahle ngezithuthi zomphakathi namatekisi azimele. Orisho nezimoto khona kanye ngaphandle kwendlu. I-ATM, indawo yobuhle, ikhemisi nendawo yokudlela konke okuphakathi kwebanga lamamitha ayi-100. Sine-ejenti yokuvakasha yasendaweni enobungane ngaphesheya komgwaqo futhi.
1 umbhede omkhulu, 1 usofa, Omatolasi abangu-1
4.64(50 okushiwo abanye)
4.64 out of 5 stars from 50 reviews
4.64 · 50 okushiwo abanye
Indawo enobungane. Zonke izinhlobo zezithuthi zomphakathi zitholakala kalula. Amajoyinti okudla kanye ne-ATM khona kanye ngaphandle kwendlu.
Ngeke sitholakale mathupha njengoba sihlala ngaphandle kwaseLucknow kodwa indawo inakekelwa umshayeli wethu wesikhathi eside uSatish futhi manje ungumnakekeli wasendlini. Thina, izingane ziyatholakala ngocingo/i-imeyili.
Hlola ezinye izinketho ezise- Lucknow namaphethelo